Nezvedu - Jiangsu Luxinda Traffic Zvivakwa Co., Ltd.
Mutengi-wekutanga, Kutendeseka, Kushingairira uye hunyanzvi, Vanhu vanotarisana, Vanoshanda uye vakagadzikana mashandiro
Jiangsu Luxinda Traffic Zvivakwa Co., Ltd.chinhu chesainzi uye tekinoroji bhizinesi iyo iri kuita mune yehunyanzvi nzira yekumaka muchina kutsvagisa nekusimudzira, dhizaini, kugadzira, uye kutengesa. Iyo iri pazasi peRunyang Yangtze Rwizi Highway Bridge, Mugwagwa, njanji, uye nzira inopindirana nechikepe, nzira yemazuva ano yemigwagwa yekubatanidza nzizi nemakungwa inounza mukana usingawanzoitika wenzvimbo.
Iyo kambani yakavamba uye yakavandudza yesainzi uye tekinoroji kutsvagisa uye kusimudzira sisitimu, yekugadzira maitiro maitiro, mhando yekudzora sisitimu, yekushambadzira sevhisi sisitimu uye manejimendi manejimendi system, ichikurumidza kukura kuita yepamusoro soro musika kufukidza, mugwagwa mukuru wekumakita wemuchina weAsia. R & D timu rekambani rakabudirira kugadzirisa huwandu hwedambudziko repasirese-nyika, kusanganisira kusaparadza mamaki, kusaparadza psoriasis, kunyorova kwepasi kubvisa uye kupenda, inopisa melt yekumaka tambo otomatiki kutyora, mumwe muchina akawanda ekumaka mitsara. , nezvimwe. Iyo inotumirwa kunhandare yendege rabha yekubvisa mota inogona kubuda saiti mumaminetsi mashanu uye nekudzokorora mvura yemhepo uye sundries zvakakwana. Yekambani ERP manejimendi inoshandura echinyakare capital kuyerera, zvinhu kuyerera, chigadzirwa kuyerera, uye ruzivo kuyerera mukombuta yakakwira inoshanda kugadzirisa kudhijitari kuyerera.
Iyo kambani inoita nehana nenzira yehana "One Belt uye One Road", zvigadzirwa zvayo zvinotumirwa kuEjipitori, Spain, Kazakhstan, South Korea, Kenya, Malaysia, USA, Bangladesh, South Africa, Saudi Arabia, Turkey, Singapore, Iraq, India, Germany, nedzimwe nyika nematunhu. Iyo kambani yakagadzika kwenguva refu uye yakagadzikana zvine hungwaru kudyidzana neUS Graco Inc. kuti irambe ichitora chikafu chemberi kubva pasirese kuti ive nechokwadi chekuti mugwagwa wekumaka mugwagwa unotora nzvimbo yepamusoro yesainzi uye tekinoroji, uye zvinobudirira kuziva kupinza kutsiviwa .
Zuva rinozadza rwendo, mhepo uye makore ari kufamba. Iyo kambani inogamuchira nemoyo wese vatengi vatsva nevakuru kuti vabatane maoko mukugadzira ramangwana riri nani remigwagwa yemigwagwa kutenderera pasirese.